Boqorka Sacuudiga oo Qatar ugu hanjabay in ay isticmaali doonaan ciidan haddii… – Hagaag.com
Boqorka Sacuudiga oo Qatar ugu hanjabay in ay isticmaali doonaan ciidan haddii…
Posted on 2 Juunyo 2018 by Admin in World // 0 Comments
Wargeyska ka soo baxa Faransiiska ee Le Monde ayaa shaaca ka qaaday in Sacuudi Carabiya ay ku hanjabeen in ay isticmaali doonaan ciidan milateri oo ka soo horjeeda Qatar haddii ay heleen nidaamka difaaca Ruushka ee S-400.
Wargeyska Faransiiska ayaa cadeeyey in Boqorka Sacuudiga ee Salman uu u diray warqad uu ku weydiisanayo Madaxweynaha Faransiiska Emmanel Macron inuu ku cadaadiyo Qatar in ay ka leexato iibsashada nidaamka difaaca Ruushka ee S-400 ama haddii kale Boqortooyadu ay qaadi doonto tallaabooyin lagama maarmaan ah si ay meesha uga saarto nidaamka difaaca, oo ay ku jirto tallaabo militari.
Wargeyska ayaa ka soo xigtay ilo Faransiis ah oo ku dhow mowduucan in Boqor Salman uu ku sheegay warqada uu qoray in uu si qoto dheer uga walaacsan yahay wada xaajoodyada ka dhaxeeya Doha iyo Moscow.
Waxay ku dartay in Boqorka uu aad uga walaacsan yahay fekerka lagu faafinayo nidaamka S-400 ee Qatar isaga oo ku sheegay inuu khatar ku yahay ammaanka hawada Sacuudiga, wuxuu ka digay in khatarta kor loo qaado..
Boqorka ayaa ku khatumay warqadiisa codsi uu u jeediyey Madaxweyne Macron uu ka dalbaday inuu ka caawiyo ka hortagga in la dhameeyo heshiiskaasi iyada oo la ilaalinayo xasiloonida gobolka.
Le Monde ayaa sheegtay in aysan weli ka helin wax faallo ah Wasaaradda Arrimaha Dibadda Faransiiska iyo xukuumadda Sucuudiga waxa ay xambaarsaneyd warqadan.
Wargeyska ayaa tilmaamay in Safiirka Qatar ee dalka Ruushka Fahd bin Mohammed al-Attiyah uu xaqiijiyay bishii Janaayo in dalkiisa uu doonayo in uu helo gantaalahan, oo loo arko in uu yahay midka ugu casrisan caalamka, iyo wadaxaajoodka Kremlin ee iibsashada nidaamkan uu gaaray heer gebogebo ah.